Maqaal: Taariikhdu waa dhaxal, waxayse u tahay ciddii cashar ka barata | dhanaanmedia.com
Maqaal: Taariikhdu waa dhaxal, waxayse u tahay ciddii cashar ka barata
January 9, 2017 // D M5 // News742 Views
Ujeedada ka dambeysa la socodka taariikhaha iyo dhacdooyinka hore waa in lagu waano qaato, laga dhaxlo xikmado wax ku ool ah, si loogu kaashado sixitaanka waaqica iyo xaaladaha markaa taagan.
Sidoo kale in wax laga barto habdhaqanka umadihii iyo shakhsiyaadkii raadka weyn ku lahaa taariikhda, kuwoodi wanaagsanaa iyo kuwoodi xumaa labadaba si loogu deydo kuwoodi wanaagsanaa la isagana jiro kuwoodi xumaa.
In wixii khalad dhacay la daraaseeyo csharna laga barto si aan mar labaad loogu kadsoomin. In la ogaado waxyaabihii burburiyay amaba kor u qaaday umadihii hore si markaas loo ogaado xaaladda dhabta ah ee markaas lagu sugan yahay.
Soomaalida wax badan ma qiimeyso taariikhda, si ka duwan umadaha kale, waxayna ka soo qaadaan wax kaa tagay tiigsi ma leh.
Waxay u badan tahay in caqabadaha haysta dalkeena, sida deganaansha la’aanta siyaasadeed ay ku timid dhaqankan khaldan, kaasoo ah in aan la diiwaan gelinin dhacdooyinka iyo taariikhaha la soo maray
Waxaa kaloo aad u badan in si ula kac ah loo daboolo taariikhaha xittaa hadiiba ay dhacdo in la keydiyo, sidoo kale in lagu ceebeeyo amama lagu qoonsado ruuxii soo hadalqaada, iyadoo wax lagu cabirayo halbeegyo khaldan, sida isla weynan qabiil amaba siyaasad markaa taagan.
Halkaas waxaa ku lumay qiimihii ay lahayd taariikhda iyo casharradii laga baran lahaa, islaxisaabtankii. In khaladkii shalay dhacay maanta lagu noqdo, in ninkii mujrimka ahaa ee shalay wax dilay uu maanta halyey noqdo asaga oon lagula xisaabtamin waxuu geystay. Sidoo kale in ruuxi wanaagsanaa uu waayo munaanti uu lahaa.
Sideedaba marka laga hadlayo dhacdo waa sida filimka oo kale, ruux ama kooxbaa mataleysa ama jilaa ka aha, sidoo kale deegaan, ileen xidigaha ma joogne-e, sidoo kale matalaadaas waxay noqon kartaa macaan iyo wanaag amaba kharaar/xaraar iyo xumaan.
Mashaakilka jira, aragtida soomaalida mar hadaad soo hadal qaado dhacdo hore waxaad amaaneysaa amaba cambaareyneysaa reer, shakhsi, koox, amaba deegaan, waa aragtida soomaalida!!!
Halkaas waxaa ka dhasha in qolo faraxdo qola kalana xanaaqdo, ruuxi hadlay amaba wax qorayna waxuu u dhexeyaa labadi dhinac dhinac waa halyey reerkayaga ama deegaankayaga amaanay, ama waa mujrim reerkayaga iyo deegaankayaga wax ka sheegay!
Dhaqankan waxuu horseeday in xaqi iyo baadilki iku milman, runtii iyo beentii la kala garan waayo, daalimkii iyo dulmanihii la kala saari waayo, cadaaladi iyo cadaalad darradiina sidoo kale.
Waxaan is leeyahay arinkan waa mid saameyn ballaaran ku leh deganaansha la’aanta dalka Somalia, horseedkana u ah in geediga lagu furo halka aan maanta taagannahay.
Hadda dowladbaa waqtigeedu dhamaaday, waxuuna ku dhamaaday guuldarro, midkalaa dhalan doonta, waxaana u taagan isla dadkii tii hore fashiliyay, waanana loo sacabo tumayaa.
Xalku waxuu noqonkaraa wacyi gelin iyo in arinkan si qota dheer looga hadlo, hogaamiyayasha dalka, aqoonyahannada iyo saxaafadduna ka qeybqaataan.